न्यायमूर्तिलाई देख्दा सम्मानमा शिर निहुरिने नभई घृणाले मुन्टो बटारिने अवस्था आएको छ । कोही माझी छैन, यस्तो अवस्थाबाट पार लगाउने !पुराना प्रतिष्ठित न्यायाधीशहरू बोल्नुपर्छ । चुप लागेर बस्न मिल्दैन ।
सबै क्षेत्रमा भागबन्डामा पार्टीका कार्यकर्ता नियुक्तिका परिणाम ।
पत्नीको हत्या गर्ने डीआईजी अदालतबाट सजाय कटौती गराएर विजयी राजनेताझैँ हात हल्लाउँदै निस्कन्छ । जाँड खाएर गाडी चलाउँदा सडकपेटीमा मान्छे मार्ने धनाढ्यको छोरो अदालतबाट धरौटीमा रिहा हुन्छ । सांसद् अपहरण गर्ने पूर्वआईजीपीविरुद्ध सरकारले मुद्दै चलाउँदैन । यो असफल राज्यको लक्षण नभए के हो ?
लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका लागि लड्ने माइला लामा, रेसम चौधरीहरू जेलमै सड्नुपर्छ । जघन्य हत्यारा रञ्जन कोइरालाजस्ता पत्नी हत्याराहरू यसरी छुट्नुपर्छ । क्याबात !
यति क्रूर हत्यामा अभिभावकत्वको हास्यास्पद तर्कमा अपराधीलाई माफी ! सडकमा मान्छे मार्नेलाई मानसिक रोग र कोरोनाको नाममा थुनामुक्त ! न्यायालयले सत्व गुमाउन थालेकै हो ? सचेत होऔँ, जनता आफैँ न्यायाधीश बन्ने दिन आउन दिनु हुँदैन । निर्णय सुधार्ने एक मौका अझै छ ।
प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग नलगाउने हो भने नेकपाको ‘करिब दुईतिहाइ’ ढेडुको पुच्छरबराबर हो । परिआउँदा प्रयोग नगर्ने, देखाउन नसक्ने हतियार कर्कलाको डाँठबराबर हो ।
‘रूपको घमण्ड गरी’ भनेर पवित्रा कार्कीमाथि एसिड छ्याप्ने अपराधीलाई कडाभन्दा कडा सजाय होस् भनेर कहाँ जाने ? न्यायालय ? न्यायालयका प्रधानन्यायाधीशलाई त रञ्जन कोइरालाले लगिसके । यसैले न्यायमूर्तिको खोज जारी छ !
ठोरी या अयोध्यातिर खोजौँ, हुन्न र ?